Hysterectomy, ama qalliin laga saaro ilmo-galeenka, waxay u noqon kartaa hab-nololeed wax ka beddelaya dumarka leh astaamaha cudurrada dumarka. Xaaladaha qaarkood, hysterectomy xitaa waxay noqon kartaa badbaadin nolosha. Haddii aad wajahayso ilmo -galeenka, waa muhiim inaad ogaato ikhtiyaarrada aad leedahay iyo habka kuu habboon. Xirfadlayaasha Caafimaadka Dumarka, oo leh goobo ku habboon Dublin, Westerville, iyo Columbus, OH, kooxdayada khabiirku waxay bixisaa ikhtiyaarrada hysterectomy oo horumarsan, oo ay ku jiraan tiknoolajiyadda robotic -ka ee aadka loo jecel yahay, dumarka leh xaalado iyo astaamaha cudurada dumarka oo aad u ballaaran. Wax badan ka ogow Qalitaanka qanjirka 'robotic' oo leh robot -ka da Vinci halkan, oo ay ku jirto inta ay qaadan karto habsocodku iyo faa'iidooyinka ay ka bixiso qalliin dhaqameedka.
Yaa u baahan qalliin?
Waxaa jira dhowr sababood oo suurtogal ah oo haweeneydu u rabto ama u baahdo in laga saaro ilma -galeenkeeda. Xaaladaha qaarkood, hysterectomy ayaa la sameeyaa si loo xakameeyo astaamaha khalkhalka leh ee aan ka jawaabin xulashooyinka daaweynta ee suubban. Dumarka kale, ka -saaridda ilma -galeenka ayaa laga yaabaa inay lagama -maarmaan noqoto iyadoo qayb ka ah daaweynta kansarka dumarka. Qaar ka mid ah xaaladaha iyo astaamaha soo noqnoqda ee dumarka u horseeda in la mariyo qalliinka ilmo galeenka waxaa ka mid ah:
Dhiigbaxa caadada oo aan caadi ahayn ama xad -dhaaf ah
Burooyinka ilmo -galeenka ee wanaagsan
Kansarka kaadi mareenka
Iyada oo ku xidhan xaaladaha bukaanka, astaamaha, iyo sababta ilmo -galeenka, waxay kaloo u baahan kartaa in laga saaro ugxan -sidaha, afka ilmagaleenka, iyo dhismayaasha kale ee dumarka.
Waa maxay qalliinka xubinta taranka ee robotka?
Robotic hysterectomy ee Bartamaha Ohio waxaa sameeya dhakhaatiirteena qalliinka ee aadka u xirfadda badan iyagoo adeegsanaya nidaamka qalliinka robotic da Vinci. Farsamadan aadka u horumarsan ayaa u oggolaanaysa dhakhtarka qalliinka inuu ka sameeyo qalliin guddi fog oo qolka qalliinka ah isagoo adeegsanaya kaamirooyinka laparoscopic -ka iyo aaladaha robotic -ka ee la galiyay jeexitaanno yaryar. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu qasabka badan ee hysterectomy robotic vs hysterectomy furan (dhaqameed) waxaa ka mid ah:
Heerka sare ee saxnaanta qalliinka iyo saxnaanta
Khatarta hoose ee dhibaatooyinka qalliinka
In kasta oo hysterectomy -ka robotic -ku uu runtii leeyahay faa'iidooyin u gaar ah, waxaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn qof walba. Inta lagu jiro wadatashigaaga ugu horreeya ee hysterectomy ee Dublin, Westerville, ama Columbus, mid ka mid ah bixiyeyaashayada ayaa si fiican uga hadli doona xaaladdaada iyo astaamahaaga, dib u eegi doona diiwaannadaada caafimaad iyo daraasadaha sawir -qaadista, oo ku sharxi doona dhammaan xulashooyinkaaga la heli karo dherer ahaan. Mid ka mid ah tixgelinta muhiimka ah ee bukaanada kala dooranaya inta u dhexeysa robotic iyo hysterectomy furan waa muddada ay u baahan doonaan inay ku suuxiyaan.
Robot -ka hysterectomy ma qaataa waqti ka dheer hysterectomy furan?
Guud ahaan marka la hadlayo, hysterectomy -ka robotic -ku wuxuu qaataa waqti dheer in la sameeyo marka loo eego hysterectomy furan. In kasta oo hysterectomy furan oo dhaqameed badiyaa lagu dhammaystiri karo 1 - 2 saacadood, hysterectomy robotic ayaa laga yaabaa inay qaadato ilaa 4 - 5 saacadood si loo dhammaystiro. Bukaannada qaba welwelka ku saabsan suuxdinta dheeraadka ah ama waqtiga qolka qalliinka, tani waxay u noqon kartaa arrin go'aaminta nooca qalliinka ilmagaleenka ee la dooranayo. Intaa waxaa sii dheer, dhakhaatiirtayada qalliinka ayaa kaa caawin doona hagitaanka hawshan waxayna kugula talin doonaan haddii hysterectomy furan ama hysterectomy robotic ay adiga kugu habboon tahay.
Qiimee dhammaan xulashooyinkaaga ilmo -galeenka ee Bartamaha Ohio
Markay timaado qalliin kasta oo weyn, oo ay ku jirto qalliinka ilmo galeenka, waxaad u qalantaa inaad ogaato dhammaan xulashooyinkaaga la heli karo iyo inaad fahamto nidaamka ugu habboon ee daboolaya baahiyahaaga. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka hysterectomy robotic iyo hysterectomy furan ee xaaladdaada gaarka ah, wac si aad ballan uga samaysato wadatashigaaga gaarka ah Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ee Dublin, Columbus, ama Westerville, OH maanta.